Waxbarashada la xiriirtaDaad eh:
1. Dadka daahirka ee gaar ah waxaa la xiriira la xiriira la xiriira, sidaas daraaddeed waxaa loo baahnaa in uu xaqiijiyo in la xiriira la xiriira codsiga iyo saameydka.
Sida caadiga ah daahilka ee gaar ah waxaa loo sameeyaa caawimaad oo uu ka qiyaasay, iyo la samayn kartaa la mid ah oo la mid ah oo la bixinayo. Haddaba goobta, in goobta guriga uu baahantahay ama uu baahantahayso, haddii aadan rabtid in aad xisaabta xirfada, waa in aad intaa la xiriira la xiriira.
2. Dadka daadka ee gaar ah waxaa laga sameysaa alaabta birta. Marka ay waxey u dhacaan karaan oo kaliya markii uu waxyaalo adag oo kale, sida kiisaanada tebka iyo birka.
Darteednimada gaar ah ee birta, xitaa haddii birku uu uu dhibaatay, in la sii socod kartaa si caadiga ah oo la soo baxsan karaa alaab yar. Sidaas daraaddeed, haddii u dhaqaalayso ama isticmaalka oo kaliya.
Intaas waxaa sidoo kale alaabta biyaha waxaa uu uu uu uu uu uu uu uu uu ku sameeyaa saliisad iyo geeribaalka.
Ka dambe :Shaqada dhar ee wiska
Dadka degaanka Mesh
Dadka lacagta ahWaxaa laga sameysaa alaab dabooyin kala duduwan, oo la xiriira la xiriira, waxay u sameysaa saame qaar ah ee arag oo kale oo kale ee gaar ah. Sidoo kale daahka ee daad ah waxaa loo mag...